Sahirana teo i Maorisy raha lasa dragon de l’Océan Indien i Madagasikara ka dia noesoriny ny saron-tavany hoy i Zafilahy ! – MyDago.com aime Madagascar
Sahirana teo i Maorisy raha lasa dragon de l’Océan Indien i Madagasikara ka dia noesoriny ny saron-tavany hoy i Zafilahy !	Magro 08 Avril 11Na dia nigaina dia nigaina aza ny hainandro tetsy amin’ny kianjan’ny finoana dia tsy nahasakana ny vahoaka ho tonga hitolona toy ny mahazatra.
Araka izany dia maro ireo naneho hevitra teny an-toerana ka anisan’izany I Charline vehivavy TIM Andrefan’Iarivo izay nitodika manokana tamin’ny vahiny Maorisiana ka hoy indrindra izy tamin’izany : « ry Maorisiana naman’ny frantsay, maminay ny tanindrazanay ka mipetraha tsara. Mahana ny ratsy natao angaha no ianareo mihitsy no manakarama miaramila miambina anareo ? Nefa dia samy nosy izao ihany.Nambarany ihany koa fa mampitondra fangirifirina ny vahoaka ny FAT ka tsy mety intsony ny matoritory, lasan’ny vazaha ny tany ary ho métisse daholo ny taranaka.
Mbola nanisy resaka momba ny fitsabahan’ny Maorisiana ny raharaham-pirenena Malagasy ihany koa ny Mpanolon-tsaim-paritr’i Ihorombe : “fantatr’ izao tontolo izao iny hetsika nataontsika nanoloana ny Masoivoho Maorisiana anikeo maraina iny ary nisy lanjany ny taratasy nalefan’ny Filoha Ravalomanana tany amin’ny COI.” Tsy namana ny Maorisiana hoy i Rostant satria izay miaraka amin’ny amboalambo dia amboalambo. Mba “Anglophone” ihany nefa dia saribakoln’ny Frantsay ?Ny diplomasia frantsay mihitsy no mikorosofahanahoy ihany izy, jereo i Côte d’Ivoire, Libye, Tunisie, Madagascar…hany ka lasa miaro ny vahoaka maorisiana sy ny fananany ny tafika Malagasy ; aty Madagasikara ianareo Maorisiana, Réunionnais, Comoriens, Seychellois no mandranto fianarana ka aza mitady hampianatra na hananatra anay Malagasy.
I Zafilahy Stanislas no namarana ny kabary androany ka nambarany fa mihasarotra ny tolona .Namaly an’i Rolly Mercia ihany koa izy : na ny fitaovan’ny RNM sy TVM na ireo traktera dia i Dada no nanafatra azy ireny ; fantatra indray fa hahazo fankasitrahana amin’ny vahoaka ny Filoha Ravalomanana dia navadika ny teny : 20 millions de $ ihany no voaloa fa ny FAT no nanefa ny ambiny, roa taona aty aoriana ve vao hita zany ? hoy ihany izy. Sahirana teo mantsy i Maorisy, hoy i Zafilahy, raha lasa dragon de l’Océan Indien i Madagasikara ka dia noesoriny ny saron-tavany.
Namaky bantsilana ihany koa izy fa sarotra amin’ny mpanafatra solika ny hiady amin’ny FAT satria ny FAT no mametra ny vidiny nefa dia miditra fatiantoka ny tompony amin’izany.
Ho tonga masiaka indray ny mpitarika rahampitso ary nanentana ny vahoaka ho avy marobe ihany koa izy ireo.
Jereo eto koa ny sary Photos Magro 08/04/2011 (1/3) miisa 10.
Jereo eto koa ny sary Photos Magro 08/04/2011 (2/3) miisa 10.
Jereo eto koa ny sary Photos Magro 08/04/2011 (3/3) miisa 04.
Océan Indien : ici se joue la grande bataille pour la domination mondiale Sambory aho raha mandainga hoy Rakotovazaha Olivier ! Raha seza sy vola no hitolomana, aleo mijanona any an-trano, tsy mety amin’ny olona tia tanindrazana izany ! Auteur Solo RazafyPublié le 8 avril 20118 avril 2011Catégories Magro, Malagasy, Politique	2 pensées sur “Sahirana teo i Maorisy raha lasa dragon de l’Océan Indien i Madagasikara ka dia noesoriny ny saron-tavany hoy i Zafilahy !”	HoAiza dit :	9 avril 2011 à 8 h 37 min	Vavaky ny vahoaka hoy itony Mauricien ny hisian’ny fifidianana!: Mba tany demokratika, nefa tsy mijery afatsy ny HAT sy ny tombotsoan’olom-bitsy.
Aiza no hisy éléctions transparentes eo ê!
– déclaration du patrimoine: ampidirina atsy dia avoaka eroa – tsy misy manaraka akory fa mbola avilivily ny resaka
– raha mbola mijoro isika dia tsy hisy crédible izany fifidianana eo
na hiroso mitovitovy amin’ny zava-nitranga tany Côte d’Ivoire… izay HATives be
Fa dia sarotra angaha hono ny manatanteraka ny préalables: fodian’ny Marc Ravalomanana, manafahana ny gadra politika?
MAY NY AFO NATSANGANY I RAJOELINA
Ny mampihomehy amin’ireto tany démokratika (Maurice, Seychelles) fa indrindra francophones dia ny mampifangaro ny dikan-teny frantsay roa samy hafa: paraphe (Yves Aimé non avalisée par le président) amin’ny signature
Rafily dit :	9 avril 2011 à 8 h 53 min	I Maorisy dia matahotra ny fandrosoan’ny Malagasy. Fizahahan-tany no ivelomany nefa raha tafavoaka soa aman-tsara isika dia tena mpifaninana avo lenta aminy. Mety amin-drizareo ny instabilite politique lava misy eto amintsika satria miteraka fiemorana lalandava eo amin’ny lafiny ara-ekonomika izany, izay lasa manome vahana azy eo amin’ny tontolon’ny fampandrosoana ny firenena. Koa tsy mahagaga ny fihetsiny. Hatrany amin’ny Mars 2009 dia efa nanohana ny FAT ny mpanohatra ankehitriny any an-toerana dia ny antoko sosilista MMM izany. Kely sisa dia rizareo indray no hitantana any, koa tsy dia mahagaga loatra izao fihetsiny izao. Ankoatr’izay, dia manana fialonana ara-politika amin’ny Afrique du Sud koa rizareo ao amin’ny vondrona SADC. Tsy tiany loatra ny fihetsiky AFS satria toa mizaozao eo imasony. Rizareo koa no firenena fampiasan’ny Frantsay amin’ny fampiarana ny politikany aty amin’ny faritra afique australe sy ocean indien.
Misy milaza fa hanampy an’i AFS ny Frantsay amin’ny fidirany ho membre ny conseil de securite ny ONU fa ny tambiny dia havotsotra i KBAGBO sy i Madagasikara. Mety mihezaka ny amin’izany ny Frantsay, fa i AFS dia tsy hamela an’i Madagascar izany satria izy efa ao anatin’ny G20, ary mitady firenena madinika manana potentiel en ressource energetique izy mba hanoana azy mba hiakatra hifaninana amin’ny G8 fahiny. Politika avo lenta io, ny an’ny Amerikana mbola manginy fotsiny, koa tiavo ny Tanindrazantsika, jereo inona no mety amintsika, manohy 50 taona manaraka miaraka amin’i Frantsa sady mitady alternative hafa? Misokatra ny adi-hevitra.
Précédent Article précédent : Atsangan’ny FAT ho fahavalon’ny vahoaka ny Tafika Malagasy !Suivant Article suivant : « Médiation parallèle » ny ataon’ny COI hoy ny ankolafy telo ka tsy azo ekena !
Les meilleurs Articles	MITANTARA NY HABIBIANA NATAON-DRY LYLSON TANY ATSIMO I D'GARY	Mme Voahirana anabavin’i Andry Rajoelina no mpanondrana Bois de Rose	POROFO : NANAO KOLIKOLY NY FILOHA CES SY HERY RAJAONARIMAMPIANINA	MyDago.com aime Madagascar